I-Rema ebizwa ngokuba yi-Apple Music's Up Next Artist-Iindaba zeNigeria kunye neGlobal
RI-imeyile ibizwa ngokuba yi-Apple Music's Up Next Artist, uKim Kardashian West unxibelelana ngokukhethekileyo noSotify, uHarry Kane ukuqala ngokuchasene neTottenham. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
Nantsi ingqangi yezihlanu zeendaba ezitshisa kakhulu… Iindaba zaseNigeria namhlanje
1. URema ogama lingu-Apple Music's Up Next Artist
NgoJuni 17, 2020, iApple Music yabhengeza umculi waseNigeria, Rema Njengomculi wakhe wakutshanje kwinkqubo ethi 'Up Next' - inyathelo lomculi wanyanga zonke we-Apple Music uzimisele ekuchongeni, ekuboniseni nasekuphakamiseni italente ekhulayo. Iindaba zaseNigeria namhlanje
NgokukaApple Music, "Ukusukela kwityala lakhe kwiRema-EP ngoMatshi ka-2019, uRema sele eyi # 18 Artist yeHlabathi kuMculo weApple ngokusekelwe kwimidlalo yobomi."
URema uxelela iApple Music, Ukwamkelwa ngu-Apple njengomculi oLandelayo yinto enkulu kum. Ndifuna ukuthatha i-Afrobeats emhlabeni kwaye ngoku umhlaba umamele, luzuko. Oku kufike ngexesha apho emhlabeni wonke abantu bemanyene kwaye beza kunye ukulwela ubulungisa. Esi sizukulwana, sizukulwana sam, simiyo kwaye siyathetha kwaye iyamangalisa ukubona, ndimi ecaleni kwabo kanye. ”
2. UKim Kardashian West ugoba i-podcast ekhethekileyo kwisivumelwano se-Spotify
I-Spotify iyaqhubeka nokubanika uluhlu lwayo lwe-podcast, ityikitya isivumelwano Kim Kardashian West luchungechunge olukhethekileyo lokujonga kwityala elibandakanya ukuguqulwa kwesimo solwaphulo-mthetho.
Isithethi seSpotify siqinisekisile ukujongana kwenkampani noKim Kardashian West kunye nomvelisi weTV Lori Rothschild Ansaldi ye-podcast, ukuze ifumaneke ngokukodwa kwiqonga leSotify. UKim noRothsson Ansaldi baya kubambisana kwaye bahambise umboniso kunye nes studio sikaSpotify's Parcast.
Ilizwi lesivumelwano sePodcast seSpotify siza emva kwenyanga emva kokuba inkampani ifumene isivumelwano sembonakalo Joe Rogan, ekuxelwe ukuba ixabisa ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidi, ukusasaza "iJoe Rogan yamava" podcast ngokukodwa kwi-Spotify ukuqala kamva kulo nyaka.
3. Amasela aphanga isikhululo samapolisa eNima eGhana
Isikhululo samapolisa saseNima eAccra ngolwesine ekuseni sabanjwa ngamasela. Amasela kuthiwa aye enza izinto ezibandakanya iilaptops, iiprinta, iiseti zikamabonwakude, nezinye izinto zokubhala.
Ingxelo ithi amanye amagosa esitishi nawo athi ihempe zawo ebezixhonywe eziofisini zithathiwe ngabaphangi. Akucaci ukuba amasela afikelele njani kwiiofisi zesikhululo samapolisa. Iindaba zaseNigeria namhlanje.
4. IAmazon yazisa ngemisebenzi engama-3,000 efumanekayo kubantu baseMzantsi Afrika abanematriki
Inkampani yamazwe amaninzi e-commerce eAmazon ivakalise ukuba imisebenzi engama-3,000 iza kwenziwa ifumaneke kubantu boMzantsi Afrika, ngezikhundla zabathengi abanomdla kwiinkonzo kunye neenkonzo zobugcisa ezifumanekayo kuye nabani na onesatifikethi sematriki.
Imisebenzi engama-3,000 - eya kuthi izise igalelo elipheleleyo leAmazon kubasebenzi boMzantsi Afrika ukuya kuma-7,000 - ijolise ekuboneleleni ngenkxaso ye-24/7 kubaxumi baseMelika eseMelika naseYurophu.
5. UTottenham v Man Utd: UHarry Kane ukuqala
Umphathi weTottenham Jose Mourinho iqinisekisile ikapteni yaseNgilani UHarry Kane izakuqala umdlalo wangoLwesihlanu wePremier League ngokuchasene neManchester United. Umhlaseli, oneminyaka engama-26, khange adlale okokuphuma iinyembezi ku-Southampton nge-1 kaJanuwari eyayifuna utyando kodwa uphinde waphila kwakhona ngokupheleleyo ngexesha lokuvalwa.
“Usebenza kakuhle, andikuxeleli ukuba uza kuqala umdlalo,” Utshilo uMourinho. Ngaba unemizuzu engama-90, 80, 70, 60? Ngumdlalo kuphela oza kusixelela loo nto. ”
Abanye abadlali ababini abaphambili, phambili Indodana ye-Heung-min kunye nabadlali abaphakathi Moussa Sissoko, abo bobabini benze utyando kulo nyaka, baya kuqalisa ngokuchaseneyo ne-United. Iindaba zaseNigeria namhlanje
Bona kwakho: I-Rema isithatha xa sikhwela kwi-Beamer yakhe + iingoma zase-african ezingakumbi
Uhlobo Rave Juni 18, 2020